cusmaan – Page 10 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Wilaayada Jubbooyinka Oo Buundo ka dhistay Salagle.(Sawirro)
cusmaan	 Mar 27, 2019 1
Wilaayaadka islaamiga ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaa ka jira horumar kala duwan oo aad u ballaaran, kuwaas oo lagu helay ku dhaqanka Shareecada islaamka iyo iska caabinta Shisheeyaha duulaanka soo qaaday. Wilaayada…
Dowladda Kenya ayaa sii wada beegsiga shirkada isgaarsiinta Hormuud oo kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ee ugu caansan Soomaaliya, waxaana saacadihii lasoo dhaafay ay duqeeyeen xarun shirkadani ku leedahay gobollada Jubbooyinka. Wararka…
cusmaan	 Mar 27, 2019 0
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War Duhur 27-03-2019
Caruur ku dhimatay Duqeyn lagu garaacay Isbitaal ku yaala Yaman.
Wararka ka imaanaya wadanka Yaman ayaa ku waramaya in diyaaradaha isbaheysiga carbeed ay duqeymo xoogan ku garaaceen isbitaal ku yaala wuqooyi galbeed wadankaas, halkaas oo ay ku dhinteen dhowr ruux oo ay caruur kamid yihiin.…
Shirar Looga Arrinsanayay Masiirka Mukhtaar Roobow oo Ka Dhacay Nairobi.
Magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaa todobaadkan ka dhacay shirar sadax geesood ahaa oo looga arrinsanayay xariga Mukhtaar Roobow iyo sida uu noqon karo aayihiisa dame. Shirarkan ayaa waxay yimaadeen kadib markii xubno ka tirsan…
Taliyihii Ilaalada Madaxtooyada Oo dhawac halis ah.
Askari katirsan Ilaalada Madaxtooyada ee loo yaqaano Koofiya casta ayaa dhaawac adag gaarsiiyay taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada ninka lagu magacaabo Cabdi-fataax Dabagaale. Taliyaha iyo Askariga ayaa waxaa soo kala dhexgalay…
Khasaare badan ayaa ka dhashay shil gaadiid oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay meel aan sidaa uga fogeyn magalada Dirirdhabe oo kamid ah dhulka Soomaaliyeed ee ay Itoobiya xoogga ku heysato. Shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku…
cusmaan	 Mar 26, 2019 0
Madaxweynaha DF ayaa khudbad xassaasi ah u jeediyay saraakiisha hogaamisa ciidamada DF xilli uu jiro gadood ay sameeyeen ciidamo badan oo isaga soo tagay furimihii ay ka joogeen Sh/dhexe iyo Sh/hoose. Khudbaddiisa ayaa u muuqatay mid…
Sarkaal iyo Istaafkiisa Oo Muqdisho Lagu Toogtay.
Rag hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qeybo kamid ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxay ku dileen sarkaal katirsan Sirdoonka dowladda federaalka iyo Askari ilaalo u ahaa. Sarkaalka oo lagu magacaabo…
Muqaawamada iyo Yahuudda Oo Duqeymo Is dhaafsaday.
Xalay waxay Jiida Qazza u ahayd habeen dagaal iyo taxadar, waxaana diyaaradaha maamulka dhul boobka ah ee Yahuuda ay duqeymo aan loo meel dayin ka fuliyeen qeybo kala duwan oo kamid ah deegaannada Qazza. Goobaha ay diyaaraduhu beegsadeen…